01 June 2018 - 16:45 By MacDonald Dzirutwe
Zimbabwean actors perform on stage in Harare, Zimbabwe, May 31,2018, in a production of "1983 - The Dark Years", a play once banned by Robert Mugabe, that relives the horrors of a government crackdown on rebels loyal to political rival Joshua Nkomo in the mid-1980s, that rights groups say killed 20,000 civilians.
The now president, Emmerson Mnangagwa, was Mugabe’s security minister at the time and many say he played a big role during the Gukurahundi massacres — making the play’s airing, just months after he took power, even more significant.
During Mugabe’s near 40-year rule, few families and victims, mostly minority Ndebeles, spoke openly about the Gukurahundi offensive carried out by a North Korean-trained brigade. Mugabe has called the period a “moment of madness“.
“If anything, because the president keeps talking about ’Zimbabwe is open for business,’ let’s discuss everything.”
Zimbabwe prison authorities have charged an officer with undermining President Emmerson Mnangagwa after he posted on social media comments calling ...